ထူးဆန်းထွေလာ – Page2– Alinyaung
လက်တစ်ဖက်ကို ၈ ကီလိုဂရမ်ဆိုတော့ အတော်လေး ကြီးမားတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အိန္ဒိယမှ ၈ နှစ်အရွယ် Kaleem ဆိုတဲ့ ကလေးမှာ မသိနိုင်တဲ့ ရောဂါကြောင့် လက်နှစ်ဖက်လုံး အဆမတန် ကြီးမားနေပါတယ်။ သူ့ကို မြင်ရင် အခြားကလေးတွေက ကြောက်ရွံနေကြပြီး ကျောင်းကို သူသွားရင် သူ့အနားကို မကပ်ရဲကြပါဘူး။ […]
March 14, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
ပညာလို အိုသည်မရှိ ဆိုတဲ့ စကားတောင် ရှိသေးတယ်မလား ဘယ်တော့မှ ပညာရေးမှာ နောက်ကျတယ် ဆိုတာ မရှိပါဘူးလေ။ ဖီလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ အဖွားအိုဟာ အသက် ၇၉ နှစ်ရောက်မှ အထက်တန်းအဆင့် စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အဖွားဟာ အထက်တန်း စာမေးပွဲကို အကြိမ်ပေါင်း များစွာ ဖြေခဲ့ပေမယ့် ခုမှသူမရဲ့ […]
March 6, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
လူတစ်ယောက်က ဥ, ဥနိုင်တယ်လို့ပြောရင် “မဖြစ်နိုင်တာ လျှောက်မပြောနဲ့” လို့ မဆိုင်းမတွ ပြန်ပြောမယ့်သူတွေချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ကယ်ကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဘဲဥလိုပုံစံ ဥ အလိုလိုတည်လာပြီး အချိန်တန်ရင် စအိုဝကနေ ဥ ဥချတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်ဟာ ဆရာဝန်တွေပါ အဖြေရှာမရတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်နပါတယ်။သူဟာ နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ […]
အသက် ၁၀၀ သတို့သားနှင့် ၉၆ နှစ်အရွယ် သတို့သမီးတို့၏ မင်္ဂလာပွဲ
March 5, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
အသက် ၁၀၀ သတို့သားနှင့် ၉၆ နှစ်အရွယ် သတို့သမီးတို့၏ မင်္ဂလာပွဲ ထိုင်းနိုင်ငံ အယုဒ္ဒယမြို့ ဘန်စိုင်းအရပ်မှာ နှစ်ယောက်ပေါင်းရင် အသက် ၉၆ နှစ်ရှိတဲ့ သက်ကြီးစုံတွဲတတွဲ မတ်လ ၄ ရက်နေ့က လက်ထပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အချစ်မှာ အသက်အကန့်အသတ်မရှိဘူး ဆိုတာကို သက်သေပြတဲ့အနေနဲ့ အသက် […]
ဒီ ၀ဋ်ကြွေး ၁၉ ချက်အကြောင်းကို သိထားတဲ့သူတွေတိုင်း အကုသိုလ်အလုပ်ကို တော်တော်ကြောက်သွားပါလိမ့်မယ်..။
March 1, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
ဒီ ၀ဋ်ကြွေး ၁၉ ချက်အကြောင်းကို သိထားတဲ့သူတွေတိုင်း အကုသိုလ်အလုပ်ကို တော်တော်ကြောက်သွားပါလိမ့်မယ်..။ ဝဋ်ကြွေး ၁၉ ချက်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ (ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ဖတ်သင့်တဲ့ ဗဟုသုတလေးပါ) ၁. ဒီဘဝမှာ လက်ဝတ်ရတနာများ နှင့် အဝတ်ကောင်းများဝတ်ဆင်နိုင်ခြင်းဟာ အရင်ဘဝက သင်ဟာ ဘုန်းတော်ကြီးများကို သင်္ကန်းကပ်လှုခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ၂. ဘာလို့ […]
February 28, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
ဂျာမန် စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန် Trutz Hardo ရဲ့ “Children Who Have Lived Before Reincarnation Today” ဆိုတဲ့သူ့စာအုပ်မှာ သူတို့ရဲ့အတိတ်ဘ၀တွေကို မှတ်မိနေတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အကောင့်တစ်ခုက တိကျမှန်ကန်တဲ့ အတည်ပြုချက်နှင့်အတူ သူ့ရဲ့အတိတ်ဘ၀ကို ပြန်ပြောပြတဲ့ ၃နှစ်အရွယ်ကောင်လေး တစ်ယောက်အကြောင်းကို လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ပါတယ်။ […]
ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးပြီး ၁ဝ ရက်အကြာမှာ ကလေးမွေးတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ဖြစ်ရပ် အသက် ၃၃ နှစ်ရှိ နွမ်ဗယ်လီဆိုနို မာဆွန်တိုဒိုယီဆိုသူ အမျိုးသမီးသည် တောင်အာဖ ရိကနိုင်ငံတောင်ပိုင်း အိစတန်းကိပ်ပြည်နယ်ရှိ သာယီဆီကျေးရွာမှဖြစ်ပြီး အသက်မရှူနိုင်ဖြစ်ကာ သေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ကလေးငါးဦး၏ မိခင်ဖြစ်သည့် နွမ်ဗယ် လီဆိုသေဆုံးပြီးနောက် မကြာမီမှာပင် […]
February 20, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
လူသား၏ဆဲလ်များပါဝင်သော သိုးသန္ဓေသားလောင်းကို ပြီးခဲ့သည့်စနေနေ့က အောင်မြင်စွာဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များကကြေညာလိုက်သည်။ “လူသားရဲ့ ဆဲလ်ပါဝင်မှု အချိုးအစားက အင်မတန်နည်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူမျက်နှာနဲ့သိုးလိုမျိုး၊ လူလိုဦးနှောက်နဲ့ သိုးလိုမျိုးတော့ ဖြစ်မလာနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူနဲ့သိုးမျိုးစပ်ဆိုတာကိုတော့ပြောနိုင်ပါတယ်”ဟု စတင်းဖို့တက္ကသိုလ်မှ ပင်မဆဲလ်ဆိုင်ရာ ဇီဝဗေဒပညာရှင် ဒေါက်တာ ဟီရို နာကာအူချီကပြောပါသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရှိ စတင်းဖို့ တက္ကသိုလ်မှ […]
February 18, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
နတ်တွေခင်းထားတဲ့ နတ်လမ်းရှိတဲ့ ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရေလယ်ဘုရား ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကာတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ထူးခြားအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့စေတီပုထိုးတွေ အများကြီး ရှိတဲ့ အထဲမှာ ယနေ့ မွန်ပြည်နယ်သံဖြူ ဇရပ်မြို့  နယ် ဝဲကလောင်းရွာအနီးက ကျိုက်နဲရေလယ်ဘုရားကို ကံကောင်းစွာ ဖြင့် ဒကာဒကာမတွေ ပို့ ပေးလို […]